192.168.0.1 Admin Ngemvume & Router Setup Guide 【2019】
Indlela Ngemvume Ukuze 192.168.0.1? A Isinyathelo ngu Isinyathelo Guide On Indlela Setha kabusha Iphasiwedi Futhi Ukucushwa Of router
Kulesi igxathu negxathu Umhlahlandlela Indlela Ngena ngemvume ku-yokuPhatha ka 192.168.0.1, sizoba sibheke isinyathelo ngasinye kanye nemihlahlandlela.
Uma ufunda lesi kumelwe wazi Kuyini 192.168.0.1? Nokho, uma ungazi ngakho. Ake ube halamuzi ke.
Uyini Lo Ikheli le-IP 192.168.0.1?
Njengoba enibaziyo nobabili, ikheli le-IP 192.168.0.1 kuyinto IP okuzenzakalelayo esetshenziswa iningi imizila broadband like D-isixhumanisi, Netgear, etc for the intent of configuring routers.
Amanye amakheli ezifana 192.168.2.1 futhi 192.168.1.1 nazo elisetshenziswa abanye brand ye imizila. Futhi, ikheli le-IP kuphela ethize ingasetshenziswa idivayisi olulodwa okuyinto uxhumeke kwinethiwekhi.
Ukuze izilungiselelo router, 192.168.0.1 is ikheli ezivamile IP isetshenziswa abakhiqizi abaningi hardware njengedifolthi ikheli le-IP imizila zabo ', kodwa abasebenzisi bangasebenzisa control panel ukulishintsha njengoba ngamunye imfuneko zabo, njenge 192.168.1.1.
ngokuvamile, iphasiwedi kuleli kheli le-IP luyehluka kuye ngokuthi izilungiselelo ngumkhiqizi router sika, kodwa ngokuvamile zingabantu:
Igama lomsebenzisi (iyazwela kofeleba): admin
Uma ushintshe iphasiwedi ye-router bese ufaka iphasiwedi ukuthi okushintshiwe. Uma kwenzeka ukhohlwe iphasiwedi, ke asikho isidingo sokukhathazeka mayelana njengoba ungakwazi kabusha router ukuze bathole iphasiwedi ezizenzakalelayo.
ngokuvamile, izilungiselelo router oshiwo ku nangaphandle kwe-router, okuhlanganisa ikheli le-IP, okuzenzakalelayo lomsebenzisi le ngemvume, nephasiwedi router. Futhi ukurekhoda inombolo ye-serial router kwezinye amalebula. Uma ungakwazi ukuthola kwabo kukhona, bese kuba sibheke Umhlahlandlela router yomholi.
Ezimweni eziningi lapho amadivayisi amabili ozama ukuyisebenzisa eyodwa IP (efana 192.168.0.1), inkinga ngokuthi ingxabano IP kwenzeka futhi umsebenzisi sihlaselwe imilayezo yamaphutha ezifana 'Idivayisi ayiphumelelanga ukuxhuma nge isiphequluli internet' noma 'Ikhompyutha ehluleka ukuxhumeka kunethiwekhi'.
Ayikwazi Ngemvume ukuze 192.168.0.1 Ikheli le-IP of router yakho?
Ayikwazi ngemvume ku 192.168.0.1 is udaba evamile ngenkathi ngemvume kuphaneli yokulawula ye-router, kungase kube nezizathu eziningi, cishe, Ikheli le-IP admin router yakho ayikho 192.168.0.1, njll. Lapha sibonisa ezinye izixazululo ezivamile lolu daba.
isinyathelo 1: Ezimweni ezinjalo, isinyathelo sokuqala ukuqinisekisa ukuthi i-Inthanethi olwabiwa router noma cha. Uma yebo, ke ungazama ikheli le-IP 192.168.0.1 futhi uqiniseke uma pre-amisiwe router yakho. Ngokuvamile imininingwane zibhaliwe Umhlahlandlela router yomholi.
Futhi uma kwenzeka, awazi igama lomsebenzisi router nephasiwedi, ungabheka ku bhukwana noma umane ziseshe injini yokusesha. Futhi, iphasiwedi-id ikakhulukazi router eyanikezwa emhlanganweni backside ka-router yakho. Ngomusa hlola kanye router-id nephasiwedi onikelwa okuzenzakalelayo.
Ungahlola ngezansi isithombe, Ngiyithathile ngokwami ​​ukuchaza ukuthi ningamthola kanjani ukuthola kalula router yakho admin nephasiwedi.
Ziyakwazi ngokuvamile 'admin', 'Isivakashi', ezinye uhlobo ezifana nalezi. Uma kwenzeka, iphasiwedi lishintshwa, ke isiphakamiso kungcono ukuba kabusha router ngokucindezela imbobo encane eceleni emachwebeni of router.
Ithiphu: Ithole ngokucophelela futhi ungasebenzisa lokuvungula anamathele imbobo cishe 10 imizuzwana ukuze kabusha izilungiselelo ezizenzakalelayo router.
isinyathelo 2: Ping IP 192.168.0.1. Okokuqala, chofoza kubha yomsebenzi ekhoneni kwesokunxele desktop yakho, bese uchofoza 'Run ...', noma cindezela nje 'Windows Inkinobho on ikhibhodi + R '. Ngesikhathi Kwiwindi, kufanele uthayiphe 'cmd', bese ufaka 'ping 192.168.0.1' ku Kwiwindi, khumbula nje ukuthi kumelwe ukuba ukhona isikhala phakathi ping futhi 192.168.0.1.
Khona-ke ukulinda Imiphumela, uma iwindi kukubonisa 'Cela Kuphele Out', kusho ikhompyutha yakho ayixhunyiwe router yakho ngempumelelo futhi uma sibonisa 'Impendulo evela 192.168.0.1: amabhayithi = 32 .. ', ke, siyakuhalalisela! Inethiwekhi iyasebenza kahle.
Okufanele ukwenze uma ekubonisa 'Cela Isikhathi ukuphuma'?
Okokuqala, hlola ukuthi ikhebula imigqa ngokufanelekile exhunywe kwi-desktop. Ngiyithathile isithombe router yami ongawabona ngenhla lapho okulula ukuyiqonda.
Khona-ke hlola zibopheke kahle ixhunywe nezimbobo kwesokudla router. I 'WAN'Imbobo kufanele ixhunyiwe ngekhebula internet ukuthi uvela inethiwekhi wakho wesevisi.
Hlola ukuthi ikheli le-IP computer sakho sifakwe ngendlela efanele noma cha. Ngenxa yaleso,
Chofoza ngakwesokudla 'My Network Izindawo'Bese uchofoza'Izakhiwo',
Chofoza inkinobho sokudla 'Local Area Connection'Bese uchofoza'Izakhiwo',
Chofoza 'lePhrothokholi ye-Inthanethi(TCP / IP) bese uchofoza 'Izakhiwo'.
Hlola ukuthi ikheli le-IP olifakile lilungile noma nje ushiye it 'Thola ikheli le-IP ngokuzenzakalelayo'.
Ungakwazi Ping router yakho ngempumelelo uma zonke izinyathelo zilungiswa OK.
Indlela Isethaphu Wireless Yakho router?
Okokuqala, vula isiphequluli sakho bese ufaka http://192.168.0.1,futhi qiniseka akusiwona www.192.168.0.1 noma 192.168.o.1 Uma ngokuchofoza namanje bedidekile ngezansi inkinobho.
Khona ibhokisi lengxoxo kuyokwenza pop-up acela igama lomsebenzisi nephasiwedi, faka igama lomsebenzisi nephasiwedi ezenzakalelayo.
Khona-router kulungiselelwa iphaneli uyoboniswa kuwe, kukhona njalo a isethaphu wizadi okuyoholela ukusetha ukucushwa ezahlukene.
Phakathi ukumisa inketho Inthanethi, khetha PPPoE (DSL virtual-dial-up), futhi kuyoba akucele i gama lomsebenzisi nephasiwedi ye-akhawunti oyithola wenethiwekhi yakho wesevisi. Gcwalisa imininingwane amafomu bese ugcine idatha, ke kufanele wenethiwekhi yakho iqale ukusebenza kahle.
In the isinyathelo sokugcina, udinga ukusetha iphasiwedi eqinile for WiFi yakho, okuzokwenza uqiniseke ukuthi indlela yakho engenantambo ngeke esesidlangalaleni khulula WiFi umhlinzeki.
Indlela Shintsha router Wifi Iphasiwedi usebenzisa 192.168.0.1 admin Panel
Kuyadingeka ukuba Vikela iphasiwedi yakho router ukugwema ukufinyelela ezingadingekile esidlangalaleni okuzokwenza uvikelekile uxhumano lwakho.
Uma ufuna ukushintsha noma uvikelekile iphasiwedi yakho WiFi router usebenzisa ikheli lasesizindeni 192.168.0.1 bese ulandela izinyathelo ezinikezwe ngezansi kuhlanganise skrini.
Ukungena ngemvume kokuqala yesizinda sakho iphaneli usebenzisa ikheli lasesizindeni se-of-router yakho 192.168.0.1
Ngemva ngemvume ukuze nomqondisi wakho iphaneli ngeke kabusha ku admin iphaneli kwalokho chofoza inketho engenantambo.
Ngemva ngokuchofoza kuso elilandelayo chofoza wireless setting.
Uma uchofoza kulungiselelwa okungenantambo kusuka nomqondisi wakho iphaneli uzobona panel admin njengoba kukhonjisiwe ngezansi.
Kulesi iphaneli yokuphatha ukubeka ungabona yakho I-password Yamanje.
Uhlobo iphasiwedi ofuna ukugcina kodwa ngaphambi kokuthayipha iphasiwedi ukwenza okuphephile yakho yayo futhi une ukuyikhumbula.
Ngemva ufake iphasiwedi ngokuchofoza sakho esisha inkinobho yokulondoloza njengoba kukhonjisiwe Ngo screenshot ngenhla. Manje ishintshwe ngempumelelo iphasiwedi yakho router.
192.168.0.1 ingenye yangasese IP, ezisetshenziswa imizila ezahlukene ukuzikhomba kunethiwekhi.
Uma une-router esebenzisa 192.168.0.1 Ikheli le-IP obaziyo yayo igama lomsebenzisi nephasiwedi, usungathayipha kheli le-IP ku-URL emkhakheni sakho sewebhu ukuze ungene ngemvume, futhi ushintshe noma iyiphi izilungiselelo router njengoba ngamunye isidingo sakho.
Little Igama Ukuze lokhu okuthunyelwe :
Ngazama konke engangingakwenza ukuze wabelane ngamunye ulwazi kungenzeka nawe futhi ngiye ukwabelana nje ngokwazi kwami ​​lapha abantu abangamazi inqubo elula kanjani ngemvume admin iphaneli, ushintshe iphasiwedi bese usetha kabusha router usebenzisa ikheli Ip 192.168.1.1.
Zonke izithombe okuyinto ayalayishwa ku lesi sihloko zithathwa ngokwami ​​okuzokwenza lula ukuqonda kubasebenzisi. Uma namanje ukudida noma ube yimuphi umbuzo mayelana router ngemvume ke ungavele amazwana ngezansi nombuzo wakho ngizozama okusemandleni ami ukunikeza impendulo yonke amazwana wakho.
By endleleni Siyabonga kokufunda isihloko yami uma uthola lesi sifundo eziwusizo ke sicela uzame usabe liqhubeke lihamba uthando & Igama. Have A Day enhle Phambili !